Kushandura nzira yatinowana, share, uye kushandisa ruzivo kuvandudza zvirongwa zvekuronga mhuri zvekuzvidira.
Kune hupfumi hwekuronga mhuri uye hutano hwekubereka (FP/RH) ruzivo rwakaunganidzwa kuburikidza nekutsvagisa uye inoshanda chirongwa chechiitiko. Zvisinei, kuve nechokwadi chekuti ruzivo urwu rwakagovaniswa pakati peFP/RH nyanzvi, inowanikwa kune vese, uye kushandiswa mukuita kunoramba kuri dambudziko. Ruzivo SUCCESS iri kushanda yakanangana neFP/RH nyanzvi pasi rese kugadzira maturusi arinani nemhinduro dzekutsigira basa ravo muzvirongwa zveFP/RH pavanenge vachitsvaga ruzivo rwakakodzera., kugovera humbowo uye maitiro akanaka, uye kushandisa zvidzidzo kumamiriro avo ezvinhu. Nzira yedu yekushandura inobatanidza pamwe chete kutonga kwezivo, maitiro ehupfumi, uye kugadzira kufunga. Verenga kuti udzidze zvakawanda nezve zviwanikwa zvedu uye zviitiko.
Kuronga mhuri nehutano hwekubereka (FP/RH) nharaunda ine nhamba yakawandisa yematsime ekuenda kune ruzivo. Chakanga chisipo chishandiso chekuunza zvese pamwechete munzvimbo imwechete. Isu takagadzira FP maonero, webhusaiti yeFP/RH nyanzvi kuti vawane uye varonge zvavanofarira zviwanikwa. Kufemerwa nePinterest uye mamwe masocial media mapuratifomu, FP nzwisiso inowanikwa mukati 21 mitauro uye yakagadzirirwa kushandiswa nyore nemunhu, chero kupi zvako. Vashandisi vanochengetedza zviwanikwa kuFP njere semaposita uye muunganidzwa. FPinsight newsfeeds inogadzirisa zvigadziriso zvevashandisi, vanogona kudhawunirodha zvinyorwa zveHTML pakombuta yavo kuti vaverenge pasina Indaneti gare gare. Pamwe chete, tinogadzira ruzivo runobatsira nharaunda yese yeFP/RH.
Iyo Pitch inoteedzana yemakwikwi edunhu anoisa vanobatana musub-Saharan Africa neAsia pakati pekugadzira nekuita hunyanzvi hwekutonga ruzivo.. Vana KM Champion Innovators vachapihwa mari inosvika USD $50,000 mumwe nomumwe, kuburikidza ne subawards, kuitira kuti vashandise mazano avo matsva. Yakatangwa muna Ndira 2021, iyo Pitch yekumhara peji yakagamuchira zvinopfuura 1,000 kushanya mumavhiki maviri ekutanga. Kupfuurisa 80 masangano akaendesa pfungwa. Takasarudza 10 semi-finalists kuti vaise pfungwa yavo kune boka revatongi. Tichazivisa kusvika kune ina KM Champion Innovators panguva yeYouTube Premiere episodhi.
Yakanyanya kupindirana uye diki-yakavakirwa boka, iyo Yekudzidza Denderedzwa modhi inotungamira yepakati-basa vatariri vezvirongwa uye tekinoroji varairidzi vanoshanda muFP/RH kuburikidza nenhaurirano dzinotsigira mune zvinoshanda uye izvo zvisiri mukuitwa kwechirongwa.. Vatori vechikamu veDenderedzwa rekudzidza vanogona kuburitsa zviono nediki, boka rinovimbwa nevezera rako mune zvakarurama 3 mwedzi yekuvandudza yavo FP/RH zvirongwa. Nhengo dzechikwata dzinobva mudunhu rimwechete, kuitira kuti zviitiko zvakagovaniswa zvinoenderana nemamiriro emunhu wese. Pfungwa yeDenderedzwa reKudzidza yakauya kubva mukudiwa kwakananga kwekudzidza nekudyidzana kwemubatanidzwa zvisina kurongwa, inoratidzwa neFP/RH nyanzvi panguva yedunhu masangano ekugadzira pamwe chete yakaitwa pakati pe2020.
Iyi nzvimbo itsva yekudzidza uye yekubatana yakagadziridzwa pamwe chete nevepasi rose vadzidzisi vebudiriro vanofarira mharadzano pakati pehuwandu hwevanhu., utano, uye zvakatipoteredza. People-Planet Connection inosanganisira Population, Utano, uye Environment (PHE) pamwe chete nehuwandu hwePopulation, Environment, uye Budiriro (PED) munda. Zvinhu zvakakosha zvinosanganisira (panguva yekutanga) kupfuurisa 250 zviwanikwa paPHE nePED, musangano wehurukuro, uye zvinongedzo kune zvimwe zviripo PHE/PED zvishandiso uye zviitiko, kusanganisira tsamba yenhau, mepu yezviitiko, uye karenda, ine zvese zvinongedzo munzvimbo imwe yepakati kuti uwane nekukurumidza.
Ramangwana Rokuziva Kuronga Kwemhuri uye Zvirongwa zvehutano hwekubereka
Ruzivo SUCCESS yakabata nhevedzano yemisangano ina yedunhu pakati 2020 neFP/RH nyanzvi kubva kuAnglophone Africa, Francophone Africa, Asia, uye United States. Kushandisa dhizaini yekufunga nzira, vatori vechikamu vakaona zvipingaidzo zvakajairika uye maitiro ari kudzikisira kufamba kweruzivo rwekuronga mhuri pakati pezvirongwa, nyika, and regions — and opportunities to transform the way our FP/RH community approaches knowledge management. Chirevo ichi chinoongorora mafambiro uye zvakawanikwa mumawekishopu ese mana nedanho rega rega mukugadzira kufunga maitiro.
Verenga Report (PDF)
Nyanzvi Dzekuronga Mhuri Rwendo rweKuzvibata muKutarisira Ruzivo
Ndeapi madhiraivha epfungwa nemafambiro anoita kuti vanhu vawane nekugovana ruzivo? Chirevo ichi chinoongorora zvakawanikwa patsvagiridzo uye maitiro chaiwo ehupfumi (sarudzo yakawandisa, cognitive overload, zvidzidzo zvekudzidza, magariro evanhu, incentives) izvo zvinoenderana nenzira idzo nyanzvi dzeFP/RH dzinotsvaga nekugovana ruzivo. Chirevo chinokurudzira kuti masangano nezvirongwa zvingagadzirisa sei zvipingamupinyi nemikana, uye inotsanangura zvinorehwa nezviwanikwa izvi zvekutonga ruzivo mukati meFP/RH nharaunda.
Tarisa iyo Webinar